विनय – अनितको होर्डिङ स्वाङ्ग र होर्डिङ राजनीति - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारविनय – अनितको होर्डिङ स्वाङ्ग र होर्डिङ राजनीति
February 20, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार, म्यागजिन 0
भारतीय राजनीतिमा गोर्खाहरू सबैभन्दा असुरक्षित कोसँग छ? भनेर भन्नुपर्दा त्यो बङ्गालको मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसंग हो – यो कुरा सबैले बुझ्नु जरूरी छ। एउटा सिङ्गो रूखको रूपमा बसोबास गर्दै आएको गोर्खा जातिलाई हाँगा -हाँगा, जरा – जरा, सिन्का – सिन्का, पात – पात, जात – जातमा टुक्रा टुक्रा पार्ने को हुन्?
यिनै ममता व्यानर्जी होइनन्?
गोर्खाहरूको राष्ट्रीय चिन्हारी र सुरक्षा खातिर छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गर्दा गोर्खाहरूलाई आतङ्कवादीको संज्ञा दिने को हुन्?
यिनै ममता व्यानर्जी होइन?
हामीलाई झुटो मुद्दाहरूमा फसाएर – घरबार कुड़की गरेर – उच्छेद गरेर हामीलाई हाम्रै जन्मभूमिमा शरणार्थी सरह बनाउने को हुन्?
यी सबै कुराहरू सम्झेर गोर्खाहरूको खुन उम्लिनु पर्नेमा उल्टा धन्यवाद ज्ञापन पो अरे कस्तो अचम्भ? वाह रे नयाँ गुलामी सोंच! वाह रे नयाँ चाप्लुसी विचार।
अहिले विनय – अनितको समुहले दार्जीलिङ पहाड़को विभिन्न स्थानमा ममता व्यानर्जीलाई धन्यवाद दिँदै लेखिएको ठुलाठुला होर्डिङहरू व्यानरहरू लगाएको जान्नमा आएको छ। खासगरी राष्ट्रीय राजमार्गमा यस्ता होर्डिङहरू धेरै देखिएको छ। लोकसभा चुनाउको छेक पारेर प्रदर्शनमा लगाइएका यस्ता होर्डिङहरू व्यानरहरू विनय – अनित समुहले कुन स्वार्थमा लगाएका हुन्, त्यो कसैलाई बताइरहन पर्दैन।
जान्ने बुझ्नेले बुझिसकेका छन्। अब जानेर बुझेर पनि नबुझे झैं गर्ने कोही छन् भने मेरो भन्नु केही छैन। हुन त अचेल दार्जीलिङ पहाड़का जनता जानेर बुझेर पनि बुझ पचाउने भइसकेका छन् तर मलाई विश्वास छ, समयमा दार्जीलिङ पहाड़को जनताले उचित निर्णय लिएर दार्जीलिङ पहाड़को गरिमा बचाएर राख्नेछन्।
विनय – अनित समुहले ममता व्यानर्जीले भारतीय गोर्खाहरूको परिचय सङ्कट साथै गोर्खाहरूको सुरक्षा विषयमा आश्वासन दिएकोमा ती होर्डिङहरू व्यानरहरू मार्फत ममता व्यानर्जीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको रहेछ। ममता व्यानर्जीले गोर्खाहरूको परिचय सङ्कट – राष्ट्रीय चिन्हारी र गोर्खाहरूको सुरक्षाको निम्ति राष्ट्रीय स्तरमा पदक्षेप लिन्छ भनेर विश्वास गर्नु भनेको आफैले आफैलाई धोका दिनु हो।
जसको ईशारामा आन्दोलन कालमा हाम्रा निहत्था भाई – बहिनीहरू माथि गोली चलाइयो – निर्दोष जनताको हत्या गरियो त्यस्तो व्यक्तिले हाम्रो परिचय सङ्कट सुरक्षाको सङ्कट समाधान गरिदिन्छ? भन्नुहोस् त पाठकवृन्द!
भारतीय राजनीतिमा गोर्खाहरू सबैभन्दा असुरक्षित कोसँग छ? भनेर भन्नुपर्दा त्यो बङ्गालको मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसँग हो – यो कुरा सबैले बुझ्नु जरूरी छ। एउटा सिङ्गो रूखको रूपमा बसोबास गर्दै आएको गोर्खा जातिलाई हाँगा -हाँगा, जरा – जरा, सिन्का – सिन्का, पात – पात, जात – जातमा टुक्रा टुक्रा पार्ने को हुन्?
विनय – अनित र ममता व्यानर्जीको पुलिस प्रशासन मिलेर हामी गोर्खाल्याण्ड पन्थी समर्थकहरूलाई अहिले पनि दिनहुँ नयाँ नयाँ मुद्दाहरूमा फँसाउने कार्य भइरहेको छ। घर कुड़की गर्ने सुचनाहरू घर घरमा टाँस्न लगाइरहेको छ।
– के हामी गोर्खा जाति होइनौं?
के बङ्गालको दासत्व स्वीकार गर्ने मात्र गोर्खाली समुदाय हुन्?
हाम्रो कसैसँग वैचारिक मतभेद हुनैसक्छन् -सैद्धान्तिक मतभेद हुनैसक्छन् – त्यसो भन्दैमा सबैलाई शरणार्थी बनाउने षड्यन्त्र गर्नु कहाँसम्म जायज हो?
अझ हामी त बङ्गालदेखि सांस्कृतिक – भाषिक – शारीरिक रूपमा अलग रहेको जाति हौं – त्यो हेरेर हामीलाई नै मास्ने षडयन्त्र रच्नु के ममता व्यानर्जीको राम्रो पक्ष हो?
विनय – अनितहरूले यस्तो कुरा बुझ्नुपर्छ। केवल आफ्नो स्वार्थको निम्ति सम्पूर्ण जातिलाई दासत्वको भारी बोकाउन अब यिनीहरूले बन्द गर्नैपर्छ नत्र समयले नै यिनीहरूलाई यस्तो पाठ पढ़ाउनेछन् कि यिनीहरूको पुस्तौं दर पुस्ताले त्यो पाठ याद गर्नेछन्।
ममता व्यानर्जी त्यही मुख्यमन्त्री हुन्, जसले भारत सरकारलाई दार्जीलिङ पहाड़मा अड़ाई लाख भन्दा ज्यादा नेपाल देशबाट आएको अनुप्रवेशकारीहरू बसोबास गर्दैंछन् र गोर्खाल्याण्ड माग्ने ती अनुप्रवेशकारीहरू नै हुन् भनेर गलत रिपोर्ट बुझाए। ममता व्यानर्जी नै हुन् जसले दार्जीलिङको छात्तीमा टेकेर पटक पटक गोर्खा जातिलाई अपमानित गरे। आज तिनलाई विनय – अनित समुहले कुन ह्रदयले धन्यवाद दिनु सकेको होला है?
सम्झँदा पनि छक्क लाग्छ।
हुन त यी होर्डिङहरू – व्यानरहरू नै विनय – अनित, ममता व्यानर्जी, तेस्रो मोर्चाको पतनको सङ्केत हो। ती होर्डिङहरूमा – व्यानरहरूमा स्पष्टसँग लेखिएको छ कि ममता व्यानर्जी, विनय – अनित, तेस्रो मोर्चा अमर रहुन्।
मरेको मान्छेलाई पो अमर रहुन् भनेर श्रद्धाञ्जली चढ़ाइन्छ त होइन?
अब जिँउदो मान्छेलाई नै अमर रहुन् भनिसकेपछि त्यो जस्तो लोदर अर्को के हुन सक्ला?
हुनपनि खाँटी गोर्खाली जनताको नजरमा यिनीहरू मरे तुल्य हुन् – विचरा तेस्रो मोर्चाले पो जन्म नलिकन नै अमर रहुन् भन्ने श्रद्धाञ्जली भेटे – धन्य हुन् ती होर्डिङहरू – व्यानरहरू छाप्न लगाउने।
अन्तमा विनय – अनित र तिनीहरूको समुहले यस्तो स्वाङ्गे राजनीति नगरेको नै वेश जस्तो लाग्छ मलाई। कारण विश्वभरिको गोर्खाली समुदायले तिनीहरूको असली अनुहार थाह पाइसकेका छन्। हजुरहरू पाठकवृन्दलाई कस्तो लाग्छ कुन्नी?
‘भारतले आक्रमण गर्दा पाकिस्तान हेरिबस्दैन’